Sofa Navy Corner Sofa maka ime ụlọ
Abia na sofa, a ga - ahọrọ nhọrọ na - adịghị agwụ agwụ na uche gị dabere na nha ha, ịke, ihe onwunwe, nka, na ndị ọzọ. E nwere ọtụtụ ụdị karịa ka ị nwere ike iche n'echiche ihu ọtụtụ ụdị. Otú ọ dị, Ihe atọ dị mkpa na-ekpebi ụdị sofa. Ndị a gụnyere ogwe aka, azu, na ụkwụ sofa, n'agbanyeghị ma ọ bụ a navy-acha anụnụ anụnụ na nkuku sofa. E wezụga azụ, ogwe aka, sket, oche, wdg, a na -enye nkọwa ndị ọzọ ka ha gụọ maka sofa na -acha anụnụ anụnụ na -acha anụnụ anụnụ. Enwere ọtụtụ ụdị kpochapụwo na ọkacha mmasị, nke ụdị ise a kacha mara amara nwere ngalaba, onye na -ehi ụra, omenala, oche ịhụnanya, na chaise.
A na -ahazi ụdị nkewa n'ọtụtụ ụzọ. Ọmụmaatụ, L-ụdị maka akụkụ ụlọ, ụdị ngalaba dị iche iche na mpaghara ebe kewara ekewa na -enye ohere idozigharị sofa dabere na ọnụọgụ ndị ọbịa na -abịa ileta. Ụdị nke abụọ bụ ụra nke ejiri arụ ọrụ abụọ rụọ. Ọ nwere ike ịnọ n'oche n'ụbọchị, na ntụle n'abalị, mgbe a na-ewepụ sofas, akwa akwa ga-apụta.
Mgbe ahụ anyị ga -ekwu maka oche ịhụnanya kachasị mkpa, sofa navy blue na -ewu ewu nke na -ewu ewu taa. Ihe na -ewu ewu nwere ike ịbụ n'ihi ihe ọ chọrọ maka obere oghere n'ime obere ụlọ. E wezụga, a na -eme akwa sofa site na akwa velvet azọpịa nke na -enye onye nọ na sofa ahụ mmetụta na -ekpo ọkụ na nro. Akụkụ ndị mara mma na azụ azụ na -eme ka ogwe aka a sara mbara juputara n'ụzọ zuru oke, mee ka ezinụlọ ọ bụla jupụta na nkasi obi gburugburu.
.Dị: Ime ụlọ Sofa Ngwongwo; Sulọ nkwari akụ; Nnọ n'ọnụ ụlọ nkwari akụ
Ihe onwunwe: Akpụkpọ anụ; Akwa; Arcylicl ụkwụ; Nhazi nke Osisi Osisi; Ụfụfụ dị elu
Ọdịdị: Oge a; Americandị American
Aha ngwaahịa: Navy Blue Nkuku Sofa
Nọmba nlereanya: #1124
Ọrụ: Sofa gburugburu nkuku
Akụkụ(cm): 789/413L*104W*78/86H; Ngwaahia Size
Mbukota size(cm): 794L*109W*83H
Ibu ibu: 185KG
Q: Gịnị bụ gị mgbe-ire ọrụ?
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nke oge a